Lagrange's Interpolation Polynomial - MT4 အညွှန်းကိန်းများ
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဖေဖေါ်ဝါရီလ 26, 2020
နေအိမ် MT4 အညွှန်းကိန်းများ Lagrange ရဲ့ Interpol Polynomial
Lagrange ရဲ့ Interpol Polynomial
မည်သည့်အချိန်အပိုင်းအခြားများအတွက်သင့်လျော်သော A ကောင်းဆုံးလမ်းကြောင်းသစ်ညွှန်ပြချက်.
Lagrange ရဲ့ Interpol polynomial ပေးထားသောအချက်များကို၏အခြေခံပေါ်တွင် function ကို၏ပြဌာန်းခွင့်အတွက်အသုံးပြုသည်. တကယ်တော့၏အချက်မှာတော့, the indicator takes the coordinates of the points located between extern int begin and extern int end (ဇယားပေါ်တွင်အနီရောင်နှင့်အပြာရောင်လိုင်းနှင့်အတူမှတ်သား), and calculates the coordinates of the next points using the Lagrange’s interpolation polynomial.
အစ – ဘား၏နံပါတ်မှတ်၏ရွေးချယ်ရေး’ coordinates for the interpolation is begun with. It is marked with the red line;
အဆုံး – ဘား၏နံပါတ်မှတ်၏ရွေးချယ်ရေး’ coordinates for the interpolation is finished with. It is marked with the blue line;
numPrognoz – the number of the points located to the left and to the right of the begin and end, အဆိုပါ Lagrange ရဲ့ Interpol polynomial အသုံးပြု. တွက်ချက်ကြသည်.
(အဆုံး-စတင်)= ပု polynomial ၏ဒီဂရီ. I.e. အကြားအကွာအဝေးလျှင် “အစ” နှင့် “အဆုံး” နှစ်ခုညီမျှသည်, ထို့နောက်ဇယားတစ် parabola အဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်, အဲဒါကိုသုံးညီမျှလျှင်, ထို့နောက်သူကတစ်ဦး hyperbola ဖွစျလိမျ့မညျ, စသည်တို့ကို.
(စတင်-numPrognoz) သုညထက်ကြီးမြတ်သူဖြစ်ရမည်, မှနံပါတ်များဖြစ်သောကြောင့် “အစ” သို့ “စတင်-numPrognoz” function ကိုအဘို့ရေးဆွဲပါလိမ့်မည်အရက်ဆိုင်များ၏အရေအတွက်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်. စကားမစပ်, အဆိုပါ -1-st bar ကိုအပေါ်ဆွဲရန်မည်သို့မည်ပုံဘယ်သူ့ကိုမှသိကြပါဘူး?
Lagrange ရဲ့ Interpol Polynomial တစ် Metatrader ဖြစ်ပါသည်4(MT4) အညွှန်းကိန်းများနှင့် Forex ညွှန်ပြချက်၏အနှစ်သာရမှာစုဆောင်းသမိုင်းဒေတာအဖြစ်အသွင်ပြောင်းဖို့ဖြစ်တယ်.
Lagrange ရဲ့ Interpol Polynomial သာမန်မျက်စိမှမမြင်ရတဲ့သောစျေးနှုန်းဒိုင်းနမစ်အတွက်အမျိုးမျိုးသောပိုင်ထိုက်သောနှင့်ပုံစံများကို detect လုပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းများအတွက်ထောက်ပံ့.
Lagrange ရဲ့ Interpol Polynomial.mq4 install လုပ်နည်း?
Lagrange ရဲ့ Interpol Polynomial.mq4 Download
သင့်ရဲ့ Metatrader Directory ကိုမှမိတ္တူ Lagrange ရဲ့ Interpol Polynomial.mq4 / ကျွမ်းကျင်သူများက / အညွှန်းကိန်းများ /
Lagrange ရဲ့ Interpol Polynomial.mq4 ပေါ်မှာ Right click နှိပ်ပြီး
indicator Lagrange ရဲ့ Interpol Polynomial.mq4 သင့်ရဲ့ဇယားအပေါ်ရရှိနိုင်ပါသည်
သင့်ရဲ့ Metatrader ထံမှ Lagrange ရဲ့ Interpol Polynomial.mq4 ဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို4ဇယား?
ယခင်ဆောင်းပါးEmilio's Trend Line Breakout Alerter
Next ကိုဆောင်းပါးRsi Ichimoku Indicator